တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ လွှတ်တော်ရေးရာ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Iwao HORII အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ လွှတ်တော်ရေးရာ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Iwao HORII အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ လွှတ်တော်ရေးရာ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယ၀န်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော ဒေသအတွင်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု၊ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်မှန်များအား နိုင်ငံတကာမှသိရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ လွှတ်တော်ရေးရာနိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျနိုငျငံ၊ လှတျတျောရေးရာ နိုငျငံခွားရေးဒုတိယဝနျကွီး H.E. Mr. Iwao HORII အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံ၊ လှတျတျောရေးရာ နိုငျငံခွားရေးဒုတိယဝနျကွီးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ဘူးသီးတောငျ-မောငျတော ဒသေအတှငျးမှ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီမြားအား ပွနျလညျလကျခံရေး ဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ မွနျမာ-ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နှဈနိုငျငံ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ ဂပြနျနိုငျငံမှ ပူးပေါငျးပါဝငျ ဆောငျရှကျပေးနမှေု၊ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျမှနျမြားအား နိုငျငံတကာမှသိရှိအောငျ ဆောငျရှကျရေးကိစ်စမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားတှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေု အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ၊ လှတျတျောရေးရာနိုငျငံခွားရေး ဒုတိယဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ပါသညျ။